Ngisho noma ingane encane ikhuluma kahle futhi ikhululekile, kaningi akakwazi ukuchaza ukuthi impela, kuphi nokuthi ubuhlungu kanjani. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi abazali bafunde ukuthola ukuthi kwenzekani emntwaneni, ngezibonakaliso ezingekho ngqo kanye nezimpawu, ukuze bangalimazi ingane ngokuphathwa okunganele futhi bangaphuthelwa ukuqala kwesifo esiyingozi.
Izimpawu zezifo zamathunjini zikhohlisayo kakhulu, ungakwazi kalula ukuzidibanisa futhi, ukubamba imali "kagogo," kuphela ukugcoba isithombe sesifo nokulimaza imvuthuluka. Ngakho-ke, ungazitholi imithi. Umphimbo unamathele ngemilenze, ukhale ngosizi, uguqa. Ukuhlaselwa ubuhlungu obunzima buphindwa nsuku zonke ngesikhathi esisodwa. Izimpawu zesisu esishukunyiswe ingane - isihloko esiyinhloko salesi sihloko.
Uma ingane futhi emva kwezinyanga ezintathu iqhubeka ihlupheka ngenxa yesisu esiswini, ihambisana nesimiso se-frothy nesibhakabhaka, ubomvu kanye nokushayeka okuzungeze i-anus, uma engatholi isisindo - buza udokotela.
Colic yamathumbu emathunjini
I-Colic ayidingi ukwelashwa futhi isuke ngemuva kwesono sezinyanga. Ukuze unciphise isimo somntwana, kungenzeka ukuthi usebenzise itiye yezingane ye-herbal nge-fennel, ukufudumala ama-trays nokucindezela, amalungiselelo nge-simethicone, ukuthi udokotela ozoya khona uzokutusa. Ezimweni eziningana, ubuhlungu besisu buyisifo sezifo eziyingozi ezidinga ukwelashwa okuphuthumayo. Shayela i-ambulensi uma ingane isine ... Ubuhlungu obuqhubekayo, ubuhlungu obuqhubekayo - udonga lwangaphambili lwesisu luyalukhuni, lusizi, ingane ayivumeli ukuthi ayithinte. Ucabanga ngokuthatha i-pose esiza ukunciphisa ubuhlungu: eceleni kwakhe imilenze yakhe igxilile, ehlezi esifundeni esiphezulu, kuzo zonke ezine, njll.
Igazi esitokisini noma uhlanza
I-Asymmetry yesisu, ukubonakala okubonakalayo kwezingxenye zayo. Izimpawu zokuzizwa komzimba: ubuthakathaka obunzima, ubuhlungu, ukuthuthumela, izandla ezibandayo nezinyawo. Ukwaziswa okudidekile. Uma ubuhlungu obunzima buyeka ngokuzumayo, ungazigibeli ukuzola: ukuzola kungasho ukuguqulwa kodonga lwegumbi elivuliwe. Ubuhlungu esiswini buhambisane nesisindo sokuvuvukala, esivamile, ukuhlanza, umkhuhlane. Kunalokho kuyingozi: ukutheleleka emathunjini kwanoma imuphi umsuka (amagciwane, amagciwane) kuyingozi ezinganeni ezincane, ikakhulukazi ngenxa yokuphelelwa yisikhathi ngokushesha. Okufanele ukwenze ngayo: shayela udokotela, futhi ngaphambi kokuba eze, qala ukugubha umntwana nge-rehydron noma amanzi abilisiwe ngamanoni.
Ngokutheleleka emathunjini, izinsana ziqhubeka nokuncelisa, ngokuvamile futhi kancane kancane. Abaculi kanye nezingane ezindala zifakwa ekudleni kokulamba. I-kid njalo (ngokuvamile evame ekwindla) ikhononda ngobuhlungu esiswini emini, ingenangqondo, ilala kabi futhi ayidli lutho nhlobo.
Kunalokho kuyingozi: ibhalansi ye-microflora yamathumbu kanye nesimiso se-metabolism siphukile; ukulahlwa kwemisebenzi ebalulekile yezimbungulu kubuthi umzimba, isimiso sezinzwa sibhekene nalokhu. Ukuze ukwelashwa kwezibungu kuphumelele, kuyadingeka ukuthi udlula wonke umndeni, kuhlanganise nezilwane ezifuywayo. UKroha ukhononda njalo ngesifo esiswini ekuseni, wenqaba ukuya enkulisa. Ngemva kwesikhashana, ubuhlungu buyanyamalala ngaphandle kokulandelela. Ngakho umzimba uphendukela esimweni esingakhululekile, esibuhlungu. Kunokuba kuyingozi: isongo esisheshayo kwengqondo ye-psychosomatics ayithwali, nokho ubuhlungu bukusho ukuthi le nkinga inokucindezeleka okungapheli, okungabangela izinkinga ze-neuroses. Sidinga ukuthola ukuthi kungani ingane ingafuni ukuya enkulisa, bese uzama ukuxazulula le nkinga. Ngezinye izikhathi kulesi sizathu kubalulekile ukuvakashela isazi sezokwelapha noma ukushintsha ingadini. Lena yintathu yama-classic, ezosiza ingane ngokubuhlungu ebuhlungu esiswini ukuze ibambe kuze kube sekufika udokotela. Beka embhedeni bese uzama ukumnciphisa phansi. Ungazama ukumphazamisa ekuzweleni okubuhlungu yincwadi noma i-cartoon. Beka i-bubble ehlanganiswe ithawula esiswini neqhwa. Kuzobekwa esikhundleni sempumelelo ngephakheji yemifino efriziwe evela esiqandisini.
• Ungavumeli ingane yakho ukuba idle noma isiphuze;
• Unganiki noma yiziphi izidakamizwa nezinye izidakamizwa ezinamandla ezingenza kube nzima ukuxilonga;
• Ungabeki i-enema;
• Ungafaki ibhodlela lamanzi ashisayo esiswini sakho.
Ngemuva kokudla, kunezinhlungu, futhi nakho - ukufutheka emlonyeni, isicashu, ukubamba. Izimpawu zikhuphuka uma ingane isondelene kakhulu, igxilile noma igxilile. Kunokuba kuyingozi: isifo sokugaya, isifo esiwumzimba, isimo esibi sempilo. Kufanele kuhlolwe yi-gastroenterologist ozoqinisekisa ukuxilongwa. Lesi sifo siphathwa ikakhulukazi ngokudla okukhethekile, ama-herbs choleretic, amanzi aphethwe ngamaminerali, i-homeopathy.
Ukulala kahle ebusuku
I-baby bath elula kakhulu
Indlela yokulahlekelwa isisindo kumuntu osemusha ngaphandle kokulimaza empilweni?
Izinhlobo zokuphapha, usizo lokuqala lokuphuma kwegazi
Owesifazane waseCapricorn, i-horoscope ngo-2010
I-Khachapuri kusuka emakhazeni amnandi nge-ushizi
Imfihlo yabesifazane: indlela yokuthola indoda?
Ungasusa kanjani usawoti entanyeni?
Ama-pepper aphekwe ngezinhliziyo zezinkukhu
Potato ukhilimu isobho
Ingulube nge-curry nobhontshisi obuluhlaza
Imicabango yokuhlukumeza ngokocansi nokuphambene: lapho umngcele khona
Umama - extrovert, indodana - introver: indlela yokuthola indlela?